Nzọụkwụ maka Nchọpụta Nchọpụta Mmasị Dị Mma Ka M Kwesịrị Ime?
Nyocha njirimara search engine kachasị mma (ma ọ bụ SEO) chọrọ ihe ọmụma dị mkpa nke mmelite algorithm nke Google na-abịa na mgbe niile. Onye ọ bụla SEO ga-enwe ike ịmata ọdịiche nke otu n'ime iri nwere usoro iji mezuo iji ruo ihe mgbaru ọsọ kasịnụ site na njedebe nke a SEO mkpọsa. Ihe omuma a ga - enyere gi aka karia ikpebi uzo i kwesiri ime maka SEO di nma.
N'isiokwu taa, ndị ọkachamara dị elu ga-agwa gị gbasara atụmatụ kachasị mma search engine nke na-arụ ọrụ na 2017. Na-agụ ma mara ha niile. Ya mere, ka anyi malite.
Usoro atọ SEO nwere ike iji mee ihe ugbu a
1. Lekwasị anya na ndepụta nke Latent Semantic
Indexing Latent Semantic, nke a makwaara dị ka LSI, bụ usoro SEO na-ewu ewu bụ ihe niile gbasara ịchọpụta mmekọrịta n'etiti echiche na okwu dị n'ime ọdịnaya. Ọ na-enyere Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ aka ịmata ọdịiche dị iche iche nke okwu na nkebi ahịrịokwu.
Naanị ntinye, LSI na-achọ maka nkwenye ndị metụtara isiokwu ndị dị na webpage.
Ọ bụ ezie na e jiri LSI mee ihe karịrị afọ iri abụọ gara aga, omume a ka bara uru maka SEO taa. Ebumnuche LSI dị mma iji melite ogo Google nke ibe weebụ gị. Kedu ihe ọzọ, ha na-eme ka o kwe omume na ọkwa nke akụ gị ga-adịru ogologo oge na SERP yana ichebe saịtị gị site na ntaramahụhụ.
2. Ederede Mpempe akwụkwọ na Nkụnye isi
Nke a nwekwara uru dị ukwuu maka nsonaazụ SEO ka mma, ọ bụ ezie na e bu ụzọ mata ya na njedebe nke afọ 90. Ọtụtụ ọkachamara SEO na-atụ aro ịmepụta usoro a na ụbọchị gị ụbọchị SEO na-eme ebe ọ bụ na engines ọchụchọ na-atụ anya ka isi isiokwu na-agụnye ihe ngosi na isi isiokwu.
Ruo ọtụtụ afọ, naanị mkpado mkpado dị na SEO bụ H1 na H2. Ihe agbanweela oge. N'oge a, enwere mkpado 6, site na H1 ruo H6 - nke ọ bụla na-egosi ịdịwanye mkpa. H1 bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa, ọ bụ naanị na a ga-etinye ya n'ọrụ n'otu ugboro, ọ bụ maka aha nke post. A ga-eji ihe omume ọ bụla sochiri nke ọ bụla mee ihe dị ka akụkụ nke ihe dị n'elu.
3. Tụlee njikọta na Njikwa saịtị
Enweghị ịgọnahụ: njikọ dị iche iche na-eme ka ọganihu na nchịkwa gị dị elu ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi.N'okwu dị mfe, njikọ ndị si na ya pụta bụ njikọ ndị ahụ na-ezo aka na mpaghara ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ijikọta na saịtị ndị na-enye aka nyere Google aka ịghọta ihe niche gị nakwa ka enwekwuwanye ogo nke saịtị gị, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na SEO gị.
Ị jikọọ na saịtị ndị nwere ikike bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma ị ga-esi nwee mmekọrịta aka na ụlọ ọrụ ndị dị n'Ịntanet nwere otu niche.
Ime ka SEO gị dị irè abụghị ihe siri ike dị ka o yiri ka ọ na-ele ya anya. Idebe ndụmọdụ ndị a kwuru n'elu ga-enyere gị aka ịmepụta atụmatụ SEO ka mma karịa nke ị na-arụ ugbu a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịkọrọ gị usoro SEO gị dị mma, echela ihere iji kpọtụrụ ìgwè anyị Semalt Source . Anyị na-enwe mmasị ịnụ site na ndị na-agụ akwụkwọ anyị!